Turning Storage intoaCompetitive Advantage – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » အသားပေး » တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်သို့သိုလှောင်မှုဖွင့်
Adrian Herrera, စျေးကွက်, Caringo ဒုသမ္မတက
ဘရော့ဒ်ဘန်း, Cloud နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ပြန့်ပွားအပြီးအပိုင်သစ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးတွင်လူတိုင်း၏ access ကိုပုံစံများပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အခုတော့သိုလှောင်မှု နှင့် သိမ်းဆည်းထားပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်မည်သည့်ကိရိယာမှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မျှော်လင့်ရသည်။ အိုး ... အဘယ်သူမျှမကပေးဆပ်ရန်လိုသည်။
ဤသည်လျှင်မြန်စွာစားသုံးသူကြည့်ပုံစံများ (ရှည်လျားသော-အမြီး, VOD, ကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း, Bing စောင့်ကြည့်, etc) နဲ့ content ၏ရရှိလာတဲ့မျှော်လင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင့်အဆတိုးမြှင့်ဖိုင်အရွယ်အစား၏မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှု (M & E) ကိုအာကာသအတွင်းအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာဖြစ်လာ အစဉ်ပိုင်အွန်လိုင်းနှင့်ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ထုတ်လုပ်သူများ။ ဤအတောင်းဆိုမှုများကိုကျေနပ်နိုင်သော M & E အဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ဖောက်သည်များနှင့်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ရ။ နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ကြည့်ရှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်မနိုင်သူများသည်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်သို့ "အခမဲ့" သိုလှောင်မှုနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်ကနေ "ချက်ချင်း" access ကို၏မြော်လင့်ကိုဖွင့်သလဲ? အဖြေ-အဖြစ်နောက်ခံအခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာပါရာဒိုင်း-ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ပွဿနာမြားစှာ၌တည်၏။ non-sexy သိုလှောင်မှုအလွှာ။
နှောင်းပိုင်းဖရန့် Zappa တစ်ချိန်က "ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မလွှဲမရှောင်ရဲ့မသာလိုအပ်ပေသည်။ " အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုနဲ့တူထိုကဲ့သို့သော, နှောင့်အယှက်နည်းပညာများအနာဂတ်မှာအတွက်က M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတှငျအမြားဖွစျလာမညျအမျှကပြောသည်။ Workflows, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် applications များ NAS နှင့်တိပ်ခွေများကဲ့သို့လက်ရှိနည်းပညာများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသောကြောင့်, လောလောဆယ်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုများ၏ထိရောက်စွာအသုံးပြုသွားမည်ခံကြသည်မဟုတ်။ ဤသည်, သို့သော်, ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကပြောင်းလဲနေတဲ့ရဲ့အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်, ငါတို့ NAS နှင့်တိပ်ခွေမဟုတ်တော့ M & E ဒေတာစင်တာအတွက်သာသိုလှောင်မှုနည်းပညာအဖြစ်အလားအလာများမှာအဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ NAS တကယ်အရမ်းစျေးကြီးထိန်းသိမ်းနည်းများလွန်းခက်ခဲသည်။ ကအခမဲ့အဘို့အပယ်သွားပေးထားတောင်မှအခါ, On-မယ် backup လုပ်ထားကုန်ကျစရိတ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ, စကေးအတွက်ဒေတာစင်တာကိုခြေရာနှင့်ကန့်သတ်နောက်ဆုံးမှာကြီးမားတဲ့ဒီဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များအတွက်ရေရှည်သိုလှောင်မှုပေးရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုတားစီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်အဓိကအား Archive သိုလှောင်မှုအနေနဲ့အလွန်အမင်းတန်ဖိုးနည်းပုံစံအဖြစ်တိပ်ဖို့ M & E လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အများအပြားလှည့်။ သို့သော်ဘေးဖယ်ကုန်ကျ, ခွဲခြားရှာဖွေပြီးချက်ချင်းအကြောင်းအရာကယ်တင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းယခုယှဉ်ပြိုင်အားနည်းချက်မှာသူတို့အားသုံးပြီးတိပ်ကိုထည့်လေ့မရှိဘူး။
NAS နှင့်တိပ်ခွေနှစ်ဦးစလုံးအမြဲတမ်း M & E ဒေတာစင်တာအတွက်နေရာတစ်နေရာရပါလိမ့်မယ်။ များစွာသောလူဒေသခံတစ်ဦးဧရိယာကွန်ရက် (LAN) ပေါ်တွင်ကြီးမားသောဖိုင်တွေအပေါ်ပူးပေါင်းအခါ NAS သို့မဟုတ် I / O များအတွက်ဒီဇိုင်းဖိုင်စနစ်က-based နည်းပညာများလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်, စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဖိုင်သော့ခတ်ဝေဖန်ကြသည်။ နှင့်အညီ, အစဉ်အမြဲဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ (DR) ပါဝငျသောပြည့်စုံသောထိန်းသိမ်းခြင်းမဟာဗျူဟာအတွက်တိပ်အပေါ်တန်ဖိုးနည်းကောလိပ်, တက္ကသိုလ် Backup တွေကိုအဘို့အရပျရှိရလိမ့်မည်။ သူကပြောပါတယ်, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုတွင်သိမ်းထားသောလိမ့်မည်။ မကြာသေးမှီကအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုနှင့်တည်းဖြတ်ပလက်ဖောင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားတည်ဆဲ applications များနှင့် Workflows အတွက်တိုးတက်မှုသငျသညျဖွင့်ထားပါသည်, ထို M & E အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုအတွက်မွေးရာပါများစွာထိရောက်စွာ၏အားသာချက်ယူ။ တနည်းအားဖြင့်ယခုသင်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူရန်သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ရုံတဝိုက်သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စက် (ခေါ်, သင့်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်များ) ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုဒါကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်ကြောင့်၏မေးခွန်းကိုစေပါတယ်။ object သိုလှောင်မှုတကယ်ကောင်းတဲ့, သပ်သပ်ရပ်ရပ် software ကို-based အထုပ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းခြင်း, ဝဘ်ဝတ်ပြုနှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါင်းစပ်။ object သိုလှောင်မှုတစ်ဦးထက်ပိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်ကွေးရန်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုစာကြည့်တိုက်များ၏အများစုမှာပြောင်းရွှေ့, ကုန်စည်ဟာ့ဒ်ဝဲများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ စီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲ, backup လုပ်ထား, ကို web ်ထမ်းဆောင်, content တွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးလျှော့ချနေကြသည်။ အခြားသောလမ်း petabytes ရန်နှင့်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောနေရာများပတ်ဝိုင်းနိုင်ပါတယ် scales တဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့အများအပြားရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာများစုစည်းနေချိန်တွင် CAPEX နှင့် OPEX လျှော့ချနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုတစ်ဦးတည်းပိုင် API ကိုမှဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်ရှိပြီးသား workflow နှင့် applications များပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် CIFS / SMB နှင့် NFS များကဲ့သို့စံ protocols များထောက်ပံ့အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများရှိခဲ့ကြပြီ။ ယင်းက M & E ကိုအာကာသအတွင်းအားလုံးနီးပါးကိုအဓိကဆော့ဖျဝဲစျေးသည်ယခု S3 API ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာသင်ယခုအရာဝတ္ထုသိမ်းဆည်းခြင်း, သင့်ရဲ့ဒေတာစင်တာ၌၎င်း, မကြာခဏသင့်လက်ရှိ Workflows သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များရန်မအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလုံခြုံအကြီးဆုံးတိမ်ဖွကြောင်းတူညီသောနည်းပညာကိုမူတည်ပြီးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ရှိသမျှသောအရာဝတ္ထုစတိုးဆိုင်များတန်းတူဖန်တီးနေကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ နေဆဲဖိုင်စနစ်များပေါ်တွင် အခြေခံ. ထို့ကြောင့်သူတို့အားဖိုင်စနစ်ကန့်အသတ်ကိုအမွေအနည်းငယ်ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ခုနှစ်တွင်, သင်ကအမှန်တကယ်ထိရောက်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်း၏ညွှန်းကိန်းများဖြစ်ကြောင်းအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်:
သင့်ရဲ့ server ကိုကိုယ်ထည်အတွက် hard drive space ကိုများနှင့်တိုင်းပင်လယ်အော်သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်အသုံးပြုရပါမည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ hard drive ကို၏သိသာထင်ရှားသောဝေမျှလိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ် databases ကိုများအတွက် drive ကို bays တစ်အချို့အရေအတွက်ကနောက်ဆုံးမှာ server ကိုနှင့်ရောင်းချသူရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ hard drive ကိုစွမ်းရည်အတွက် 20-30% ရန်သင့်အားတက်ကုန်ကျ, စကေးမှာစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုဖြေရှင်းနည်းများ။
ရှင်းလင်းသောသတ္တုကနေဆာဗာများ booting အားဖြင့်စွမ်းရည်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်ကိုလည်းသင်၏အထည့်သွင်းစဉ်းစားတဦးဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု 4K မှာကြီးထွားလာကြသည်ကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာစဉ်းစားပါ။ 8K နှစ်အနည်းငယ်လမ်းဆင်းတာမျိုးသည့်အခါထို့နောက်ကလစ်၏တူညီသောအရှည်များအတွက်3ကြိမ်သိုလှောင်မှုလိုအပ်, မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျ OS ကိုအတူ hassle မှရှိပါကတပ်ဆင်ပြီးနှင့်ပိုပြီးစွမ်းရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထည့်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, သငျသညျအဖိုးတန်ဝန်ထမ်းနာရီကိုမီးရှို့နှင့်ပိုပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များပေးရလိမ့်မည်။
အပြန်အလှန်ဖလှယ်သည် HTTP, S3 သို့မဟုတ် NFS မှတဆင့် / ဖတ် / Edit ကိုဖိုင်တွေရေးရန်, ထိုသို့သက်သေပြရန်သင့်ရောင်းချသူမေးရန်စွမ်းရည်ရှာဖွေပါ။ အမှန်တကယ်ဖိုင် namespace ထိုင်ရှိရာကဒီလိုအပ်ချက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ အစားသိုလှောင်မှု Silo များဖျက်သိမ်းရေးကြောင်း YOSS (သေးသည်အခြားသိုလှောင်မှုကျီတစ်ခု) ဖန်တီးသောစျေးကွက်အပေါ်ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံရှာဖွေရေးအရာဝတ္ထုနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားစိတ်ကြိုက် metadata ကိုအတူလည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ဦး metadata ကိုဒေတာဘေ့စလိုအပ်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်သတိထားရှိစေသတည်း။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တစ်ဦးဒေတာဘေ့စများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူမည်သည့် application ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကိုမေးပါနှင့်သူတို့ခြောဝေမျှဖို့တချို့ထိတ်လန့်ပုံပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ DBAs တွေ့ရှိရန်ခက်ခဲအကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။
အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု၏လယ်ပြင်တွင်ရှေ့ဆောင်သကဲ့သို့, Caringo အဖွဲ့ 12 နှစ်ကျော်အဘို့ဤအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ပြီး, နှင့် M & E လယ်ကိုငါတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဘလော့ဂ် အပေါ်ကိုမှန်မှန်။
Adrian "AJ" Herrera စျေးကွက်မှဆန်းသစ်သိုလှောင်မှု, Cloud နှင့်မီဒီယာ software နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ခဲ့အတွေ့အကြုံ 20 နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။ San Diego မှပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကနေ MBA ဘွဲ့နှင့်ချပ်မန်းတက္ကသိုလ်ကနေသတင်းအချက်အလက်စနစ်များအတွက် BS နှင့်အတူ, AJ စျေးကွက်၏ Caringo ရဲ့ VP အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
SoftAtHome, MStar, CES2017	2017-09-06
ယခင်: တီဗီ Nova ကို select Apantac T က # မြင်ကွင်းစုံ
နောက်တစ်ခု: ကို ABS ကွန်ယက်မောင်လေးကလည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်ဝှမ်းအားကစားလွှမ်းခြုံအတွက်အနိုင်ရရှိမှု Edge LIVE ပေး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်သို့သိုလှောင်မှုဖွင့်" ။ http://www.broadcastbeat.com/turning-storage-into-a-competitive-advantage/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။